Warkii.com-News and information about Somalia LAYAABKA ADUUNKA: Dal ku yaala Qaaradda Yurub oo Qofkii Dhimasho raba la dilo. - Warkii.com-News and information about Somalia
Jane oo ah hooyo laba caruur ah leh waxa ay sheegtay in aysan walwal ku heynin 9-ka janaayo ee sanadka cusub oo ah maalinta ay isu diyaarineyso in lagu dilo isbitaal ku yaalo Dalka Swizerland .
”Way adagtahay marka aad caruurtaada ka tageyso oo aduunka aad ku cidleyso lakin waxay kaloo raacisay waa ka xumahay inaan dibada u aado inaan is dilo waayo anigaa doortay inaan dhinto maxaa Denmark sharci ay uga dhigi waysay in qofku is dilo karo ” ayey tiri Jane Hoffmann .
Kim Hoffmann waa Ninka qaba Haweeneydan go’aansatay in la dilo waxa uu gacan weyn uu ka geesanayaa in xaaskiisa nolosha la dhaafiyo oo ladilo waxa uuna muujiyay in go’aanka Xaaskiisa ee ah in la dilo in uu ku raacsan yahay.
Arintan ayaa dad badan oo dunida kunool layaab ku tilmaameen in qof go’aansado in la dilo isaga oo nool, waxaana la tilmaamay in Haweeeydanay geeri kadooratay nolosha xanuunka badanee mudooyinkii lasoo dhaafay ay ku jirtay.
Jane Hoffmann waa haweeney u dhalatay Dalka Denmark waxaana haleelay oo dhulka dhigay Xanuuno daran taa oo jirkeeda meyd ka dhigay laakin maskaxdeedu way wacantahay ilaa xiligan.